Maitiro ekuisa Discord pane yako GNU / Linux distro nhanho nhanho | Linux Vakapindwa muropa
Discord ndeimwe yeano mufashoni mameseji ekushandisa. Ehe, lens yakafanana neiyo yevamwe vakaita seTeregiramu, WhatsApp, Signal, nezvimwe, asi inoshandiswa kunyanya munyika yekutamba. Muchokwadi, kukosha kwayo kwakadaro kuti mumakore achangopfuura kukosha kwayo kwakawedzera. Makore mashoma apfuura yaive nekota yevanopfuura mamirioni mazana matatu vashandisi vanonyoreswa pari zvino, zana miriyoni vanoshanda pamwedzi.
Rekodha nhamba dzausingafanire kushandisa imwe yechipiri usina gadza ichi chishandiso pane yako GNU / Linux kugovera. Neiyi nzira, iwe unogona kushandisa zvakanyanya zvese zvainokupa uye ugone kutaura nevamwe vatambi panguva yako yekuzorora ...
1 Chii chinonzi Discord?
1.1 Anotsigira mapuratifomu
1.2 Izvo Discord Inogona Kukuitira Iwe (Zvimiro)
2 Maitiro ekuisa Discord pane Linux nhanho nhanho
2.1 Sign up kune Discord
2.2 Gadzira uye ubatanidze maseva
Chii chinonzi Discord?
Kurwisana ipuratifomu iyo inokutendera iwe kuti ugadzire ekutaurirana / vhidhiyo kufona maseva kuitira kuti vakanyoreswa vashandisi vasangane uye vataure pamusoro wenyaya Imwe yeaya maseva akafanana nerudzi rwemunharaunda, chikamu, chinowanzopatsanurwa nematimu.
Saka riini vatambi vanobatana, Vanokutendera iwe kuti upinde mumakamuri, mapoka uye zvakavanzika chats zvaunoda, zvakafanana nemabatiro aungaita mune maapps seSlack. Asi ichiri chimwe chishandiso chekutaurirana.
Discord inowanikwa ye akasiyana mapuratifomu uye mahara zvachose. Kana iwe uchida kuishandisa, une izvi mikana:
Ishandise kubva kune chero web browser kubudikidza naye web interface, pasina kuisa chero chinhu.
Dhawunirodha yako mutengi app, mune ino kesi inowanika kune anoshanda masystem:
Izvo Discord Inogona Kukuitira Iwe (Zvimiro)
Discord ine akawanda mashandiro, sekukubvumidza kuti utaure nevamwe vashandisi kuburikidza nekutaurirana mameseji, kutaura nezwi, uye kunyange videoconferensi nevanoverengeka vashandisi panguva imwe chete.
Nharaunda mukati meNyonganiso dzakakamurwa nemaseva. Sevha yega yega inoshanda nenzira yakafanana neiyo IRC, saka nharaunda yega yega ine yavo sevha, iine makamuri akati wandei mukati meiyo server uye dzakasiyana nzira, kune vashandisi veboka.
Matanho anogona kuva ese ari maviri vanhu vose, kuvhurika kune chero munhu anoda kuve nechekuita, zvakare zvakavanzika, kudzora anopinda. Mune zvakavanzika, chete avo vane kukokwa vanogona kuwanikwa, izvo zvinogona kutumirwa sechibatanidza. Mune veruzhinji, ingori nyaya yekutsvaga mukati meapp nemazita uye kupinda.
Uye zvakare, Discord ine zvimwe zvinotonhorera maficha iyo iwe yaunogona zvakare kuona mune mamwe meseji mameseji ekunyorera. Muchokwadi, ine imwe yesarudzo dzakanakisa dzematurusi ekuita hupenyu uye ruzivo zvive nyore kwazvo kune vashandisi.
Chimwe chinhu chakakosha kwazvo, kunyanya kune vatambi, ndechekuti ine yakaderera latency, uye hazvizokanganisa mutambo pamisangano. Uye kana zvese izvo zvinoita sezvidiki kwauri, Discord inogona zvakare kusanganisa yevhidhiyo mutambo wechitoro, kana katarogu, yakafanana neEpic Store, Valve Steam, nezvimwe, kubva kwazviri kuwana mamwe mazita
Maitiro ekuisa Discord pane Linux nhanho nhanho
Kuti uwane gadza iyo yemuno app yeGNU / Linux Mune yako distro, matanho aunofanirwa kutevedzera ari nyore kwazvo:
Kana iwe uchida sarudzo iri nyore, unogona kuyedza maneja wako wepakeji, sezvo ichiwanikwa mune akawanda marevista eakanyanya distros. Imwe sarudzo ndeye kushandisa yako distro App Store kune imwechete-tinya kuisa. Semuenzaniso, muUbuntu unogona kupinda Ubuntu Software, tsvaga zita rayo, uye tinya Isa.
Wana zviri pamutemo webhusaiti kubva Discord, kusvika dhawunirodha app.
Dzvanya bhatani Dhawunirodha yeLinux.
Iwe uchaona kuti sarudzo mbiri dzinoratidzwa:
deb: ndeye .deb package yeDebian / Ubuntu yakavakirwa kugovera. Iyo pre-yakanyorwa bhanari package ichave iri nyore kwazvo kuisa sezvaungaita chero imwe DEB.
tar.gz: iri tarball kune avo vasina migove yakadai, kunyangwe iyi sarudzo ingangove inoshanda kune maDebian / Ubuntu masisitimu uye zvigadzirwa.
Paunenge uchinge watora pasuru kurodha pasi, chinotevera kuisa icho. Zvichienderana nerudzi rwepakeji yakadhindwa mune yakasarudzika sarudzo, unogona kutora nzira mbiri:
Yeiyo dhagi package:
Iwe unogona kushandisa GDebi kuisa graphically nekuvhura iyo yakadzingwa .deb neiyi app.
Iwe unogona zvakare kushandisa mirairo "sudo apt-tora yekuvandudza && sudo apt-tora kuisa /path/package/discord.deb" pasina makotesheni. Chinja iyo nzira kune iko iko dhiri.
Yeiyo tar.gz package, iyo yekumisikidza ichave yakawanda bhuku, asi ichashandira chero GNU / Linux distro:
Ita shuwa kuti une kutsamira kwakagadziriswa, ndiko kuti, iwe une libc ++ uye libnotify yakaiswa.
Enda kudhairekitori uko iko kurodha pasi package kuri uye unomhanya wekuraira "tar -xzf /name/package.tar.gz" pasina makotesheni.
Zvino, fambisa iyo Discord icon kuenda / usr / sharepixmaps.
Fambisa Dicord.desktop ku / usr / share / application.
Chekupedzisira fambisa dhairekitori rekunyorera Discord ku / usr / share / discord.
Yakagadzirira uchitova nemutengi weDiscord akaiswa uye akagadzirira kumhanya… Unogona kuiwana pakati pezvishandiso zvawakaisa.
Sign up kune Discord
Kana iwe wakaparura Discord kekutanga, iyo inokumbira zita rekushandisa uye password yeaccount yako. Zviripachena, kana wanga usiri kushandisa Discord pane chero imwe chikuva zvisati zvaitika, haugone kuve neakaundi account Saka, iwe unofanira kunyora. Izvo zviri nyore sekutevera nhanho idzi:
Iwe unogona kupinda yepamutemo Discord webhusaiti uye tinya pa Kupinda, uyezve pachiratidzo cheKusaina. Kana kunyoresa zvakananga kubva kuapp yawakaisa, iyo inokupa iwe sarudzo yekupinda kana kunyoresa.
Pinda zvese data zvazvinokumbira iwe, senge yako email, zita rekushandisa uye password.
Dzvanya Enderera kupedzisa maitiro.
Iwe uchagamuchira email kune iyo kero iwe yawakanyora kuratidza. Vhura iyo email uye tinya pane iyi link inokuratidza uye ichave yakagadzirira.
Gadzira uye ubatanidze maseva
Zvino unogona kupinda mune iyo Discord app kana pawebhu. Chero nzira, kana iwe ukangopinza zita rako uye password, chinotevera chinhu chauchazoona ndicho chikuru Discord app.
Iwe uchaona kuti pane ikholamu ine eseva ese akagadzirwa kana ayo awakatobatana nawo, kana isiri nguva yekutanga. Iko kune zvakare + bhatani kuti iwe unogona kudzvanya kugadzira kana kujoina server nyowani. Ukangodzvanya + iwe uchaona sarudzo dzekugadzira kana kujoina, tinya pane yaunoda:
Para pinda sevha yakatogadzirwa, iwe unozofanirwa kunyora kero yekukoka kuseva iwe yaunoda kuisa, uye kana yawanikwa, tinya pairi uye tinya pa Gamuchira kukokwa. PaInternet pane madhairekitori uko iwe kwaunogona kuwana maseva ekujoinha, mukati discord.me, discord.orgkana discordea.net.
Para denga chimwe chitsva, tinya paGadzira sevha, sarudza mhando yechiteshi, sarudza imwe yetemplate kana kuigadzira kubva pakutanga. Wobva wanyora zita revhavha, dunhu uye icon kana logo (128x128px). Pane imwe chete yakasikwa, iyo yakananga kukoka kodhi ichaonekwa kukoka vashandisi. Ramba uchifunga kuti aya makodhi anopera muzuva rimwe chete, kunyange uchikwanisa kuvaita zvachose. Rangarira zvakare kuti mukati me server unogona kugadzira zvikamu uye mukati mavo chiteshi.
Kana iwe wagadzira chiteshi, kudzvanya pane zviteshi kunoratidza sarudzo dzekumisikidza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Maitiro ekuisa Discord pane yako GNU / Linux distro nhanho nhanho
Kugadzira tsamba muMautic, yekushambadzira chikuva